LUK 18 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (LUK 18)
Nꞌobodo ahụ kwa, e nwere otu nwanyị di ya nwụrụ anwụ nke na-abịakwute ọkaikpe a oge nile na-arịọ ya ka o nyere ya aka megide onye iro ya.
Mgbe ahụ Jisọs kwuru sị, “Leenụ ihe ajọ ọkaikpe a kwuru. Ọ bụrụ na mmadụ ọjọọ dị otu a nwere ike kpebie inyere nwanyị na-arịọsi ya arịrịọ ike aka,
ọ bụ na Chineke agaghị enyekwara ndị ahụ ọ họpụtara aka, bụ ndị ahụ na-akpọku ya ehihie na abalị. Ọ̀ ga-anọ tee anya ịbịa inyere ha aka?
Ana m ebu ọnụ nꞌihi ịdị ọcha nꞌihu gị ugbo abụọ nꞌizu ụka. Ana m enye onyinye otu ụzọ nꞌime ụzọ iri nke ihe nile m nwere oge nile.’
Ụfọdụ mmadụ kpọtaara Jisọs ụmụ ha ka o bikwasị ha aka. Ma mgbe ha du ụmụaka ahụ na-abịa, ndị na-eso ụzọ Jisọs hụrụ ha baara ha mba.
Ma Jisọs kpọrọ ụmụnta ahụ ka ha bịakwute ya. Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, “Kweenụ ka ụmụntakịrị bịakwute m, unu egbochikwala ha, nꞌihi na alaeze Chineke dịrị ndị dị ka ha.
Nꞌezie, onye ọ bụla na-anabataghị alaeze Chineke dị ka ụmụntakịrị ga-esi nabata ya, agaghị abanye nꞌime ya.”
Ma Jisọs zara sị ya, “Gịnị mere i ji sị na m bụ ezi mmadụ? Ọ dịghị onye bụ ezi mmadụ. Ọ bụ nanị Chineke bụ ezi onye.
Nwoke ahụ zara sị, “Edebezuchaala m iwu ndị a nile siterị na mgbe m bụ nwanta.”
Jisọs legidere nwoke ahụ anya mgbe o si nꞌebe ọ nọ na-apụ gwa ndị na-eso ụzọ ya sị, “Ọ bụ nnọọ ihe siri ike ime, bụ na ndị ọgaranya ga-abanye nꞌalaeze Chineke!
Ọ dịrị ịnyịnya mfe isite nꞌanya agịga gafee karịa na onye ọgaranya ga-abanye nꞌalaeze Chineke.”
Mgbe ndị mmadụ nụrụ ihe Jisọs kwuru, ha jụrịtara onwe ha ajụjụ sị, “Ọ bụrụ na o si otu a dị, onye kwanụ ka a ga-azọpụta?”
Pita kwuru okwu sị, “Onyenwe anyị, leenụ, anyị ahapụla ụlọ anyị soro gị.”
Jisọs gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, “Nꞌezie, o nweghị onye ọ bụla hapụrụ ụlọ ya ma ọ bụ nwụnye ya ma ọ bụ ụmụnne ya, ma ọ bụ ndị mụrụ ya, ma ọ bụ ụmụ ya, nꞌihi alaeze Chineke,
nke na-agaghị anata ihe karịrị ihe ọ hapụrụ nꞌụwa a. Ọ ga-anatakwa ndụ ebighị ebi nꞌụwa ga-abịa.”
Nꞌihi na a ga-arara m nye nꞌaka ndị mba ọzọ. Ha ga-eji m mee ihe ọchị, mesoo m mmeso ihere, gbụọkwa m asụ.
Ndị na-eso ụzọ ya aghọtaghị okwu ndị a nile ọ gwara ha. E mere ka nkọwa okwu ndị a bụrụ ihe zoro ezo nꞌebe ha nọ. Nꞌihi ya, ha aghọtaghị okwu o kwuru.
Mgbe Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya bịara nso nꞌobodo Jeriko, o nwere otu nwoke kpuru ìsì nọ nꞌakụkụ ụzọ na-arịọ arịrịọ.
Mgbe nwoke onye ìsì ahụ nụrụ ụzụ ọtụtụ mmadụ na-agafe, ọ jụrụ ụfọdụ mmadụ ka ha kọwaara ya ihe na-eme.
Ha gwara ya na ọ bụ Jisọs onye Nazaret na-agafe.
Mgbe ahụ onye ìsì ahụ bidoro iti mkpu nꞌoke olu na-asị, “Jisọs nwa Devidi, biko meere m ebere!”
Ndị mmadụ ahụ nọ nꞌihu Jisọs baara ya mba sị ya mechie ọnụ. Ma onye ìsì ahụ nọgidekwara na-eti mkpu na-asị, “Nwa Devidi, bikonụ meere m ebere!”
Mgbe Jisọs nụrụ ya, ọ kwụsịrị, zie ozi ka a kpọta onye ìsì ahụ. Mgbe onye ìsì ahụ bịara nso, Jisọs jụrụ ya ajụjụ sị,
“Gịnị ka ị chọrọ ka m meere gị?” Onye ìsì ahụ zara ya sị, “Onyenwe m, biko, biko, achọrọ m ịhụ ụzọ.”
Jisọs zara ya sị, “Ọ dị mma, bido hụwa ụzọ.”
Nꞌotu mgbe ahụ onye ìsì ahụ bidoro ịhụ ụzọ. O sooro Jisọs na-eto Chineke. Mgbe ndị mmadụ hụrụ ihe mere, ha onwe ha bidokwara ito Chineke.